Fahafahana fitsapana ho avy
Amin'ny ezaka ataonay hatrany hanomezana traikefa tsara indrindra ho an'ny vondrom-piarahamoninay dia mitady olona 300 izahay hanampy anay hizaha toetra ny Fanavaozana Vaovao IV ho avy. Ao anatin'ity fitsapana ity ny fandraisana anjaranao dia hanampy ny ekipanay hanangona vaovao sarobidy alohan'ny handefasana ny fanavaozana izao tontolo izao ho an'ny besinimaro. Mikasa ny hisokatra hisoratra anarana rahampitso amin'ny 8 maraina PDT izahay. Jereo eto amin'ity fotoana ity raha mila torolàlana sy fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba fandraisana anjara!
Zavatra tsy mampino Microsoft simulator sidina Sinematika, novokarin'i Flight X:
Nanampy santionany amin'ny aty izahay.
Nozarainay roa ny tabilao "Documentation" ao amin'ny DevMode ho rohy 2: "Misokatra eo an-toerana" mba hanokafana ireo fisie izay alainao amin'ny fanavaozana SDK anao, na ny "Open online," izay hitarika anao mankany amin'ny docs.FlightSimulator.com Ity farany dia tokony ho ny zava-baovao indrindra hatrany, na dia manandrana misoroka ny tsy fitoviana misy eo amin'izy ireo aza isika.
Miaraka amin'ny fanavaozana manaraka, nandefa mpamosavy voalohany izahay, izay hamorona ho azy ireo rakitra XML ho an'ireo seranam-piaramanidina vao noforoninao.
Nanamboatra fianjerana izahay rehefa mivoaka ny "fipihana tsindry iray" izay hita maso ny fikandrana Properties.
Mampiharihary izao ny simvars fanafainganana ny Rotation. Azo alaina amin'ny fanavaozana manaraka!
Ny santionany SimVarWatcher dia nohavaozina mba hanampiana SimVars sy Units vao tsy ela akory izay.